Izibonakaliso eyinhloko unhlangothi
Ikhaya Nomkhaya, Abantu abadala
Iningi lethu bayamangala ngobuqotho ukuze ufunde ukuthi kubonakaliswa lokuqala iziyaluyalu kwegazi cerebral avele eside ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi. Kakade sobusha nesokuba umuntu omdala ekuseni, lapho umzimba wethu elikhula ngokushesha unikina iziphepho hormone evelayo phambi kwamehlo "iphuzu", "amabala", "Yizimpukane elimhlophe", isicanucanu nekhanda. Zonke lezi izimpawu cerebral liningi igazi, kodwa ngenhlanhla, kulonyaka izifo ezinjalo azibona esiyingozi futhi ngokwabo. Lapho isikhulile, iziyaluyalu kwegazi lobuchopho iningi lethu emuva ngaphansi kwegama semithambo (Neuro), dystonia, noma okuthiwa neurosis zenhliziyo, kusukela lapho isinyathelo esisodwa kuphela ukubonakaliswa yokuqala esingamahlalakhona of cerebral ukugeleza kwegazi kanye nesifo sohlangothi.
Yini ukufa kohlangothi, yiziphi izimbangela kanye nezimpawu zesifo sohlangothi? Ngakho, isifo sohlangothi - i-acute, ukuphazamiseka okungazelelwe kwegazi ebuchosheni lapho ukugeleza kwegazi e-Umthambo ngokuphelele noma ingxenye ivinjiwe. unhlangothi kabuhlungu ngokuvamile kuyaphela ekufeni. I emikhulu isitsha ezilimele, le washaywa unhlangothi kabuhlungu. Imbangela ezivame kakhulu lena ukuvaleka ihlule (thrombus) imithambo letiphakela ubuchopho ngegazi. Lezi amahlule ngokuvamile zenzeka isifo sokuqina kwemithambo yegazi. Enye imbangela unhlangothi is ukopha ebuchosheni noma ngamanye amazwi ukopha ebuchosheni, okuvame kakhulu kwenzeka in iziguli isifo sokuqina kwemithambo yegazi, ukuhlupheka ngaphandle-high blood pressure.
Lezi zinhlobo ezilandelayo imivimbo: oluhambisana futhi ischemic. Ngo ischemic ingozi cerebrovascular kwenzeka ngenxa ukuvaleka umkhumbi, futhi oluhambisana - isitsha ukudabuka kanye ukopha kwezicubu ingqondo. Njengoba ischemic futhi oluhambisana unhlangothi, kwenzeka ngokumelene ingemuva izifo ezifana ukuqina kwemithambo yegazi cerebral, isifo senhliziyo, umfutho wegazi ophakeme, fibrillation atrial, ukuhluleka kwenhliziyo futhi tachycardia paroxysmal.
Phakathi zonke izimo unhlangothi ischemic izilonda ubuswa kwegazi cerebral, akha 86% amacala, ukopha ebuchosheni - kuze kufinyelele 24%, lonke - non Kwenhlekelele ukopha subarachnoid. Namuhla unhlangothi sekuba kuyinkinga enkulu emphakathini nasempilweni emhlabeni minyaka yonke engaba yizigidi ezingu-6.5. Abantu isifo sokufa kohlangothi palsy. Phakathi kwalabo abasinda yokukhubazeka kukhona 70-80%, 20-30% of okuyizinto usedinga ukunakekelwa njalo. Stroke - ingenye sezizathu esiyinhloko kwandziswa kwelinani letikhungo abantu abakhubazekile sabantu.
Kuye zinhlobo, ukukhula kwawo kuhambisana eziningi izimpawu. Ngakho, i-stroke ischemic, ngokuvamile Nokho zimiswe ngaphakathi amahora 1.5-2, uma embolism yayo phezulu kungenzeka abukhali, okungazelelwe. Oluhambisana - ngokuvamile has a ebukhali, ukuqala acute, ephelezelwa nokulahlekelwa ukwazi noma amahloni, ukuhlanza kanye bekhanda. Ngaphezu kwalokho, izimpawu zesifo sohlangothi zincike onjani basendaweni eyacekelwa ischemia noma ukopha. Uma izinguquko zenzeka Nenkabazwe kwesokunxele ubuchopho, izimpawu unhlangothi eceleni kwesokudla umzimba, futhi okuphambene nalokho. Ngokwesibonelo, endabeni umonakalo iyizingxenye engaphelele zingase zibhekane izinguquko ebuntwini, ukuziphatha iziyaluyalu ukulawula abampofu imizwelo, futhi umonakalo Nenkabazwe kwesokunxele kuhilelani ukuhlukumeza imisebenzi Inkulumo.
Lena isimo esiphuthumayo ukuze uma ebusweni izimpawu zesifo sohlangothi, kunesidingo esiphuthumayo shayela i-ambulense, ukuletha isiguli esibhedlela. Linda ukufika ambulense isiguli kufanele uthathe evundlile, igumbi lapho kubalulekile pholisa. Kudingeka nokuba ukuhlehlisa izingubo, nobunzima bokuphefumula, susa kusukela ebuhlanzweni umlomo futhi amazinyo.
Owawuthwele nesineke unhlangothi njalo ezenziwe elele phansi, kwasinda equlekile esigabeni sesithathu lapho isiguli akuyona transportable. Ngokuqondile ezifana isimo iziguli afe akuvamile unhlangothi ngokuvamile ujoyine bedsores kanye nenyumoniya, edinga ukunakekelwa njalo, ukuvula, ushintsho yelineni, wamathumbu ukuhlanzwa, yokudla vibratory nasesifubeni.
Ukukhathala okungamahlalakhona syndrome - isifo ezikhathini zanamuhla.
A isamba semali yokukhokha sabathola impesheni yabadala abathembela futhi kanjani
Movement iziyaluyalu noma isifo i-Parkinson
Veteran Wezabasebenzi. Ingatholakala kanjani lesi sihloko zokuhlonishwa?
Indian lokuqala baba nomama kwa-'72
Uchungechunge Interesting intsha
Kuyini heraldry: kwencazelo esidlule zomlando ukubaluleka okwamanje
Umphumela ongemuhle okubhema emzimbeni. Yini yezinkinga kuhilelani usikilidi ubhema?
Sohy PSP 1008: izici kanye nezimpendulo. Indlela ukukhanya Sohy PSP 1008?
Kanjani ukuba sibekezelele Izimpawu zezinkanyezi? Ukuhambelana, ukuziphatha nobunjalo izimpawu ezahlukene zezinkanyezi
Senhliziyo conduction uhlelo: isakhiwo, umsebenzi kanye nezici yokwakheka bokuphila
Indlela ukubhala iskripthi imuvi
Yiziphi izibuko samanje?
Amacebiso awusizo abawongoti. amathiphu Piggy ngoba umdobi